Bishii Abriil waxay ahayd bilo adag, safar badan, laakiin natiijooyin fiican. Maantu waa maalin maaliglaha lagu dabaaldego maalinta shaqada ee waxaan rajeynayaa inaan ku nasto. Halkan waa soo koobid wixii xagaaga kulaylaha kuleylka ee 45, shan ka badan waxa uu qoraagu leeyahay. Google Earth, warar iyo isbarbardhigyo kale ...
AutoDesk Bentley Systems blog ESRI Google Earth GPS KML GIS kala cayncayn ah egeomates My
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Internet iyo Blogs, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Toddobaadkan waxaan ku khasbanaaday inaan ka hadlo siyaabaha looga faa'iideysan karo internetka, waxay ahayd koox ganacsadaha yaryar, kuwa haysta profile Hi5! ilaa taajka foosha; sidaas darteed waxaan rabaa inaan u diyaargaroobo fariintan si aan uga hadlo dakhliga soo gala websaydii hore markaanu ...
KML ... OGC qaabka la midka ah ama qaabka monopoly?
Warkaan ayaa ku wareegsan tagaa, oo in kastoo ay sannad ka badan ka hor maamula format KML ah waxaa loo tixgeliyaa heer ... markii la ogolaado ahbaa dhaleeceyn badan oo ku saabsan ujeedooyinka ee Google in ay heleen qaab ah in si aad u wanaagsan u taagan. Haatan waa la sheegi karaa in kml uu ku jiro ...
AutoDesk Bentley Systems ESRI Google Earth KML GIS kala cayncayn ah SHP
Sanadkan Bentley shirkii sannadlaha ah, ee lagu qabto Baltimore, ayaa isbedelaya habka dhaqanka ee Bentley Institute. Xaaladdan oo kale, waxay kala sooceen khadadka mawduucyada, halkii ay ka soo saari lahaayeen waxyaabo gaar ah, sidaas darteed waxay noqon kartaa in hal bandhig ah oo ka hadlaya qaabaynta buundada, waxaad arki kartaa jilidda biyaha ee loo isticmaalo ...
Fileinfo.net waa goob ah ururinta faylasha faylka, waxay uqoraanayaan nooca codsiga iyo in barnaamijyada Windows iyo Macku furi karaan. Waxaad samayn kartaa raadinta tooska ah, sida .dwg, ama sidoo kale nooca faylka, tusaale ahaan "CAD". Tani waa natiijada soo baxda marka aad dooraneyso ...
Sida ay fikrado James Fee, sida ma blog caan ah, AutoDesk wuxuu ku saabsan yahay in uu ku dhawaaqo kale cusub ee codsiyada GIS, oo inkasta oo aanay muujin ay il, waxa ay u muuqataa in AutoDesk ugu dhakhsaha badan ku dhawaaqi doonaa ... laakiinse hubaal waa kaftan caan ah maalin "Abaalmarinta Maalinta Abriil". sigaarka hadda, taas oo ka dhigaysa noo malaynayaa dhowr ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub
Dadka qaarkood waxay ku wareegaan golaha weydiistaan ​​buugyada qalabka Bentley. Waxaa ugu wanaagsan in la raaco ilaha asalka ah. Waxaad dooran kartaa luuqada iyo nooca; la tasho internetka ama soo qaado faylka caawinta (kordhin .chm) Meesha waa http://docs.bentley.com/, halkan waa ...
Waxaan idiin sheegayaa dhowr maalmood ka hor in aan helay album ah Microstation XM, oo ay ku jiraan Bentley Map iyo Bentley Cadastre; laakiin ujeedada ah inaan dib u cusbooneysiiyo nolosheyda mishiinkayga ayaan waqtigaan u hayaa markii aan ka soo noqday safarkayga. Dareenka ugu horreeya waa wax qariib ah, oo loogu talagalay dadka isticmaala qaybaha hore, in ...
Bishii Maarso, ayaa u dhexeeysa fasaxa Easter, safarka Guatemala iyo rajada ah in uu ka qayb galo Baltimore. Laakiin wax walbana, marwalba waxay jirtay waqti yar oo ay ku akhriyaan qaar ka mid ah blogyada, kuwaas oo aan doortay ugu yaraan hal mawduuc oo xiiso leh oo aan ku talinayo akhriska. Ugu wanaagsan ee golaha Gabriel Ortiz ...
AutoDesk ayaa ku dhawaaqay suurtogal ah inuu ku soo bixi version a si buuxda u functional of AutoCAD iyo AutoCAD 2009 2009 Raptor Lt. version Tani waa ansax ah maalmo 30, waxaa laga heli karaa maanta March 25 2008, hab loogu talagalay dadka isticmaala si ay u tijaabiso muuqaalada cusub ee version 2009. Waa maxay AutoDesk waxay arinkan arimahan: 1. Sii isaga ...
Qaar waxay ku magacaabaan unugyo, magaca waa unugyo waxayna u dhigantaa qaybaha AutoCAD. Muuqaal hore waxaan arkeynay meesha ay ku soo dejineyso blocks for AutoCAD, iyo sida loo bedelayo faylashaas .celcelinta faylalka loo yaqaan 'AutoCAD blocks'. Haatan aan aragno meesha laga soo dejisan karo unugyada: Waxaa jira dhowr goobood, halkaas oo aad ka heli karto ilaha qaar sida ...
DNA waxaa loo aqoonsan yahay aqoonsiga nolosha, oo ku salaysan fikraddan, Marina Bay Pedestrianian Bridge waxay noo saameysaa naqshadeeda gaarka ah illaa iyo hadda iyo joomatari taas oo u oggolaanaysa in ay u egtahay in ay ku socoto iyada oo loo marayo DNA DNA ah. On dhulka waxa uu leeyahay qaab ah curved, oo leh ...
Uf, waxaan ugu dambeyntii ka soo laabanayaa safarkayga Guatemala, safar dheer, laakiin waxbarashadii, CD-da in Machadka Lincoln uu na siiyay waxa ugu fiicnaa ... Aragti ... ku dhex nool degaanka ku nool waxaan helay a fasax Mexican ah Sidaasi ... iyo sida ayan uga xumaanin inay timo saaraan, oo aan rajeynayo ...
Waxa aan ka tagnay; Wax yar ayaannu ku qosli karnaa tirakoobyada Google Analytics, sababtoo ah noloshu waxay jirtaa wax ka badan tilmaanta. Halkan waxaa ku qoran su'aalo xiiso leh :) inaad u dirto Hoygan. 1 Halkee laga helaa buugga ArcView ... mmm, waxaa jira meelo badan laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid waxtar leh si aad u ogaato sida ...
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay dad badani is weydiiyaan, ka dib marka shirarka ESRI la yimaado dhamaanba qiyaasta buugta aad u fiican, laakiin marar dhowr jeer waxay keenaan jahwareer sida aan ku haysto waxa aan doonayo inaan sameeyo. Ujeedada dib-u-eegistaani waa in la keeno qalab wax ku ool ah.
Boggii hore Page 1 ... Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 page Next